တွားသွားသတ္တဝါ - ဝီကီပီးဒီးယား
Left to right, top to bottom: Sinai agama (Pseudotraoelus sinaitus), Tokay gecko (Gecko gecko), ကိုမိုဒိုနဂါး (Varanus komodoensis), Tuatara (Sphenodon punctatus), တောကြီး မြွေဟောက် (Ophiophagus hannah), Eastern green mamba (Dendroaspis angusticeps), American alligator (Alligator mississipiensis), Gharial (Gavialis gangeticus), Saltwater crocodile (Crocodylus porosus), Florida box turtle (Terrapene carolina bauri), Galápagos tortoise (Chelonoidis niger), and Green sea turtle (Chelonia mydas)
တွားသွားသတ္တဝါဆိုသည်မှာ ရက်ပတီလီးယား (Reptilia) မျိုးပေါင်းတွင် ပါဝင်သော သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ထင်ရှားသော လက္ခဏာများမှာ အသက်ရှူခြင်း၊ အခွံပါသော ဥများကို ဥခြင်း (အချို့သော မြွေများမှာ အရှင်မွေးကြသည်။) နှင့် အကြေးကွက်များ နှင့် အကြေးခွံများ ပါရှိသော အရေပြားများ ရှိကြခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
တွားသွားသတ္တဝါများကို ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးအေးသတ္တဝါများဟု ရှုမြင်ကြသည်။ သူတို့ကို ခြေလေးချောင်းရှိသော သို့ ခြေလေးချောင်းရှိသော မျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသော တက်ထရာပေါ့ဒ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင် တွားသွားသတ္တဝါများသည် အန္တာတိက တိုက်မှ လွဲ၍ တိုက် တိုင်း လိုလိုတွင် နေထိုင်ကြပြီး မျိုးစစ် ၄ ခု ခွဲခြားထားသည်။
Synapsida (နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် ၎င်းတို့၏မျိုးသုဉ်းမျိုးနွယ်များ)
ပါဏဗေဒ အလိုအရ သိပ္ပံနည်းကျ ဇီဝမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (တက်ဆွန်)ပြင်ဆင်
အခြားကြည့်ရန်။ List of reptiles နှင့် List of snakes
ယေဘူယျခွဲခြားထားသော မျိုးသုဉ်းပြီး နှင့် ရှင်သန်ဆဲ တွားသွားသတ္တဝါအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အရေးပါသည့် အုပ်စုများကို အဓိကထား၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။.
တွားသွားသတ္တဝါ (Reptilia)/ Sauropsida
↑ Sander, P. Martin (2012). "Reproduction in early amniotes". Science 337 (6096): 806–808. doi:10.1126/science.1224301. PMID 22904001. Bibcode: 2012Sci...337..806S.
↑ Benton၊ Michael J. (2005)။ Vertebrate Palaeontology (3rd ed.)။ Oxford: Blackwell Science Ltd.။ ISBN 978-0-632-05637-8။
↑ Benton၊ Michael J. (2014)။ Vertebrate Palaeontology (4th ed.)။ Oxford: Blackwell Science Ltd.။ ISBN 978-0-632-05637-8။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တွားသွားသတ္တဝါ&oldid=708632" မှ ရယူရန်